Imo bomb blast: Gọọmenti akasiela ndi ọnwụ metụtara obi | odumblog
posted on Jun. 16, 2019 at 4:38 pm
Osote onye ọchịchị Imo steeti bụ Gerald Irona gara leta ndi Eziorsu n’Oguta local gọọmenti dị n’Imo Steeti maka ụmụnne ha nwụrụ n’ogbunigwe dara ụbọchi Tọọzdee. Irona kasiri ndi a obi ma gwakwa ha na gọọmenti steeti na-akwado ha.
O kwuru na ha na-agba mbo ịhụ n’ụdị ihe ahụ emeghi ọzọ. Ọ gbara ndi bi ebe ahụ ume ka ha hara itinye iwu n’aka ha ma rịọkwa ha ka ha dere duu n’ihe mere. O kelekwara ndi nchekwa obodo maka itinye ọnụ n’ihe mere.
Rabiu Ladodo bụ kọmịshọna ndi uwe ojii kọwara na ihe merenu bụ na otu onye na-ere akpakara na-akugwo igwe mgbe ogbunigwe a gbara. Mmadu abụọ ndi ọzọ nwụrụ bụ onye kwụ n’akụkụ ya na onye ọzọ na-agafe agafe.
Rabiu gwara ndi Imo steeti ka ha kpachara anya ha n’ebe ihe gbasara igwe nọ. O kwukwara na ya na ndi otu akpakara ga-enwe nzukọ ka ọ dọọ ha aka na nti gbasara igwe.
Onyeisi ndi Eziorsu bụ Prince Emmanuel Ukade kelere gọọmenti steeti maka obi ọ bịara kasie ha. O kwuru na ọṅụ juru ha obi n’ihi na nke a gosiri na gọọmentị agbakụtaghị ha azụ.
Gọọmentị steeti Imo nyere ezinaụlọ ndi nwụrụ anwụ ego iji kwado ha.
Tags:bombbomb blastIgbo blogImoOdumblog
Ọzọdimgba eloola nde naira asatọ na puku nari isii na Kano